Ababoneleli beNkqubo yoTywala kunye neFactory-iChina abavelisi beNkqubo yoTywala
Kwisiseko se-MSG ye-crystallization pot-effect single-effect, isixhobo samkela inkqubo ye-double-effect, ifilimu ekhulayo, i-decompression evaporation, i-steam entsha inika ubushushu kwi-first-effect, xa kuthelekiswa nenkqubo yasekuqaleni, esi sixhobo sinciphisa i-50% yokusetyenziswa komphunga.I-Crystallization yi-Self-developed Oslo elutriation crystallizer ngaphandle kokuvuselela.
Ngeempawu "zetyuwa ephezulu" yolwelo olulahlwayo oluveliswe kwiselulosi, kushishino lweekhemikhali zetyuwa kunye neshishini lemichiza yamalahle, inkqubo yokutyhutyha okunyanzeliswayo okujikeleza kathathu isetyenziselwa ukugxila kunye nekristale, kunye noludaka lwekristale oluphezulu luthunyelwa kwisahluli. fumana ityuwa yekristale.Emva kokwahlukana, utywala oomama bubuyela kwisistim ukuze buqhubeke.Uxinzelelo lokujikeleza.
I-five-tower-three-effect yi-teknoloji entsha yokonga amandla eyaziswa ngesiseko sesiqhelo se-distillation ye-distillation ye-five-tower differential, esetyenziselwa ukuveliswa kotywala bezinga eliphezulu.Ezona zixhobo ziphambili zokwahluka koxinzelelo lweenqaba ezintlanu zibandakanya inqaba ekrwada yokuhluza, inqaba yokuxutywa, inqaba yokulungiswa, inqaba yemethanol, kunye nenqaba yokungcola.
Le nkqubo ifanelekile ukuveliswa kotywala obuqhelekileyo kunye ne-ethanol yamafutha.Le nkqubo ifumene ipatent yesizwe yase China.Yinkqubo ekukuphela kwayo ehlabathini esebenzisa i-double-cold tower three-effect thermal coupling distillation iteknoloji ukuvelisa utywala obuqhelekileyo.
Kwishishini, i-ethanol iveliswa ngokubanzi yinkqubo yokuvutshelwa kwesitatshi okanye inkqubo ye-ethylene ethe ngqo ye-hydration.I-ethanol yokuvundisa yaphuhliswa ngokwesiseko sokwenziwa kwewayini kwaye yayikuphela kwendlela yokuvelisa i-ethanol ixesha elide.